Home Nahoana ny tantaran'ny fahazazana
Izahay dia manao tantaran'ireo mpilalao baolina kitra hatramin'ny fahazazana mba hampahafantarin'ny mpankafy ny tantara momba ireo mpilalao tiany. LifeBogger dia misambotra ny tantara tena mahavariana sy mahavariana momba ny kintana amin'ny baolina kitra miresaka ny fahazazany hatramin'izao. Izany tokoa isika!
Ny olombelona rehetra eto an-tany dia manana tantaram-pitiavana ary ireo mpilalao baolina kitra dia tsy avy amin'ny planeta vahiny. Tsy mamboly koa ny hery mahery vaika sy ny fahaiza-miaina. Olombelona izy ireo ary afaka mamantatra ny taranany eto an-tany.
Araka izany, toa ny olombelona rehetra, mpilalao, mpitantana ary na dia ny mazoto amin'ny fanatanjahantena aza dia manana tantara momba ny fahazazana izay mahavariana sy mahaliana ny zava-nitranga tamin'ny taona nahalany hatramin'ny fahatanorany ka hatramin'ny lehibe.
Lifebogger dia manome antsipirihany ny zava-nitranga tamin'ny fahazazana amin'ny mpilalao baolina kitra, mpitantana ary olona ambony. Avy amin'ny LR: Van Dijk, Luka Modric, Kylian Mbappe, Zinedine Zidane ary Aleksander Ceferin. Credits sary: ​​LB.
At Lifebogger, maka ny tantaram-piainana toy izany isika izay singa manan-danja amin'ireo biolojika mahaliana izay asehontsika momba ny mpilalao baolina, mpitantana ary olom-boafidy eran'izao tontolo izao.
Ny antony ao ambadik'izany fikatsahana olo-malaza izany dia ny fanomezana ny volavolan-tsika amin'ny fanatsarana ny lalao baolina kitra, ka mampatsiahy fa ny fanaintainan'ny fahatanorana, ny fahazoana tombony ary ny fanoloana ireo mpilalao baolina kitra, ny mpitantana ary ny mazoto dia tsy hanome lesona tena sarobidy indrindra amin'ny fiainana fa mahaliana an'ireo izay vao mandeha amin'ny diany mandeha fotsiny.
Ny tantaram-piainana na ny tantaran'ny baolina kitra dia manan-danja ho an'ireo olona tia baolina kitra tanora amin'ny zavatra hafa. Sary nahazoan-tsary: ​​GhHeadlines.
Tsotra, ity lahatsoratra ity dia mikendry ny hanomezantsika ny mpihaino ny hevitray momba ny maha-izy antsika amin'ny fanolorantsika ny zava-nitranga tany am-boalohany ny mpilalao baolina kitra, mpitantana ary ny elite eo ambanin'ireo loham-pianakaviana mahaliana izay voasoratra tsara sy voakaly ary manaitra.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao Football sy Elite Iza no nateraka ratsy
Ny mpanao sy filoham-pirenena sasany tamin'ny baolina kitra dia teraka nahantra, ny sasany tsy nandova na inona na inona, ny sasany niasa mba hanaisotra ny tenany amin'ny fahantrana. Na inona na inona fomba nampifamadika ny zava-nitranga, ny fahantrana dia tena antony manosika ny gadona malaza amin'ny tantara momba ny baolina kitra.
Ny teny litera 7 tsy misy marika sy mampatahotra dia mamaritra amin'ny fiainana sy ny fiakaran'ny Cristiano Ronaldo, nitondra ny tsara indrindra ao anatiny Luis Suarez, tsy nialany elita koa; Roman Abramovich ary Gianni Infantino fa natao Gabriel Jesus ' mitombo laza fa manosika ankizy ankizy tsy ampy taona an-tapitrisany any Brezila.
Nijaly nefa nitsiky, i Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Gianni Infantino ary Gabriel Jesus dia niady tamin'ny fiainana tany am-piandohana. Credits sary: ​​LB.
Lasa mpanosika mahery ny fahantrana na dia mampalahelo aza ireo mpilalao baolina ireo. Soa ihany fa ny lalao baolina kitra dia lasa fiara ho azy ireo hanatsarana ny toe-bolan'izy ireo.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao Football sy Elite Iza no teraka
Etsy ankilany, teraka ny mpanao hetsi-bolon'ny baolina kitra sy ny elita teraka tamin'ny taon-dasa, ny sasany nanana sotro volafotsy ary ny hafa manana pasifiers diamondra. Vokatr'izany dia nanana fiandohana lehibe izy ireo ary niaina lavitra noho ny mpivarotra fahantrana.
Ny tia ny Aleksander Caferin ary Michel Platini nilofanan'izy ireo tamin'ny fanohanana ilain'izy ireo hiaina fiainana lehibe raha toa ny mpanentan'ny mpilalao baolina kitra toa ny Mario Gotze, Andrea Pirlo ary Gerard Pique tsy nisy olon-tsy fantatra manankarena talohan'ny nahazoany laza.
Mario Gotze, Gerard Pique ary Andrea Pirlo dia teraka tao anatin'ny fianakaviana manankarena. Credits sary: ​​LB.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao baolina kitra izay naharitra ady sy korontana tamin'ny naha-ankizy
Ny tantaran'ny fahazazan'ny mpilalao baolina kitra marobe hafa dia tsy azo lazaina raha tsy misarika mpankafy amin'ny alàlan'ny dia mandratra fo noho ny ady an-trano sy ny korontana izay mety hamafa ireo mpilalao tsy misy intsony.
Ny fijerena ny fiainam-piandohan'ny nahaterahan'i Nizeriana teraka Victor Moses milaza ny vokatry ny rotaka tany Nizeria Avaratra, na izany aza Juan Cuadrado ary Serge Aurier manana fahatsiarovana mahafinaritra momba ny herisetra ao amin'ny tanànan'i Necocli sy Côte d'Ivoire.
Juan Cu square dia iray amin'ireo mpilalao baolina kitra vitsivitsy izay naharitra ady sy korontana nandritra ny fahazazany. Sary: LB.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao Football izay efa ela velona fony mbola zaza
Taloha talohan'ny nahafantarany ny lalao baolina kitra dia nanana fanandramana ratsy i Diego Costa izay saika nanadino ny fiainany.
Tranga nahatsiravina iray no niseho tamin'io fotoana io vao enim-bolana monja i Costa. Namela ny reniny izy no nandeha nanasa ny lovia. Natory kely tao amin'ny kidoro tao amin'ny efitranony i Costa, nefa tsy fantany fa misy bibilava misy poizina ao aoriny. Rehefa niverina avy tao an-dakozia ho any am-pandriana ny reniny dia nahita bibikely misy poizina nanatona ny zanany.
Josileide da Silva Costa dia noheveriny fa kitapom-peo izany, fa io zavatra raisin'izy io ho toy ny kaomina io dia nandeha tamin'ny zanany. Mihetsika haingana izy, dia nisintona ny tanan'i Costa mba hisoroka azy amin'ny moka an'ilay bibilava misy poizina manavotra ny ainy.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao baolina kitra iza no rain'izy ireo amin'ny angano
Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny fitarihana dia nanampy ny mpilalao baolina kitra maniry hahita ny fanantenana ao anatiny indrindra rehefa tsy olon-kafa ny mpanolo-tsaina fa ray niteraka ireo mpanolo-tsaina.
Raha tsy misy fanazaran-tena bebe kokoa toy ny ray, toy ny zanaka dia manana Thiago Alcantara izay nitondra an'i Mazinho rainy. Ny hafa kosa tafiditra Saul Niguez izay manitsaka ny lalan'ny rainy rainy Sergio Busquets izay modely taorian'ny an'i dadan'i Carlos. Mety ho lasa manan-karena kokoa ve ny endriny hafa?
Thiago Alcantara, Saul Niguez sy Sergio Busquets dia zanaky ny taranja baolina kitra. Credits sary: ​​LB.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao Football izay Niala tsy nahita fianarana
Ny mpanao soccer vitsivitsy dia tsy nanana faharetana mba hiara-miasa amina fiaraha-miasa ary mandray torolàlana avy amin'ny mpampianatra, ny sasany kosa tsy nahazo diplaoma tamin'ny ambaratonga faharoa satria nisondrotra ny fikarakarana baolina kitra nandritra ny fahazazany.
Ny mpilalao baolina kitra dia misy angano tahaka izany Pele, ary koa mpilalao baolina kitra matihanina taloha ary masoivohon'i Barcelona - Ronaldinho. Ny fidinana midina amin'ireo mpilalao ao anatin'ny vanim-potoana taonan'ny taonarivo - tamin'ny fotoana nanoratana - manana ny tiana isika Cristiano Ronaldo ary kintana Barcelona - Lionel Messi izay tsy nahavita fanabeazana mahazatra.
I Ronaldinho, Messi sy Pele dia tsy nanana olana tamin'ny fanabeazana nandritra ny fahazazany. Credits sary: ​​LB.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao baolina izay saika tsy milalao
Voalaza fa rehefa miha-lasa ny lalana, mihaosa ny lalana. Ny maxim dia nohamarinina nandritra ny taona maro teo amin'ny sehatry ny ezaka rehetra ataon'ny olona tsy misy baolina. Raha ny tena izy, dia nanampy ny fiantohana fa tsy misaraka amin'ny fahazoana mpilalao baolina matihanina ity tontolo ity izay mety ho lava hiala mandritra ny fananganana ny asany.
Tsy maro no mahalala an'io Wayne Rooney's Nianjera toy ny karatra karatra ny fitiavana baolina kitra raha mbola zaza 14 vao herintaona izy. Toy izany koa, tsy hisy fifaliana mampientam-po Ibrahimovich eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra raha toa ka tsy niresaka momba ny fiainana mankafy amin'ny dockyards izy. Aminy, Alisson Becker's Saika nisintona azy tsy ho eo amin'ny baolina kitra ny ray aman-dreny satria nitantara ny fitomboan'ny biolojia miadana izy na dia tamin'ny taona 15 aza.
Young Wayne Rooney sy Ibrahimovich saika tsy nilalao ny baolina kitra. Credits sary: ​​LB.
Maninona ny tantaran'ny fahazazana - Mpilalao baolina kitra izay nanomboka amboara amin'ny mpilalao mpilalao
Dinamika dia teny izay tsy hita any amin'ireo lahatsoratra ara-batana fotsiny, misy eo amin'ny baolina kitra fa ny fanatanjahantena dia resaka fizika ihany koa. Manomboka amin'ny dingana voalohany manan-danja ataon'ireo mpanao baolina am-boalohany izy ireo amin'ny alàlan'ny fisakanana baolina iray ho fahafinaretana amin'izany. Taorian'izay dia niditra an-tsehatra tamin'ny taranja basikety izy ireo na nanohy niofana niaraka tamin'ny ekipa teo an-toerana sy ny oniversite club.
Raha eo am-pelatanany ny mpamokatra baolina kitra dia ezahana amin'ny toerana samihafa izy ireo mandra-pahatongan'ny faritra na mafy orina azy. Noho izany, tsy mahagaga raha misy olona mirenireny hiala amin'ny toerana mpiaro ka manakatra ny varotra an-dry zareo ho mpamely fa ny sasany dia toa Thibaut Courtois nianjera tamin'ny dingana iray tsy ho mpiaro ho lasa mpiambina feno. Toy izany koa, David Gea dia mpilalao avy any ivelany mandra-tsapany tao an-trano tao anatin'ny haben'ny paositra.
David Gea sy Thibaut Courtois no nanao fiofanana voalohany ho mpilalao avy any ivelany talohan'ny nahalasa azy ry zareo. Credits sary: ​​LB.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny Fitantarana ny Ankizy Ankizy. amin'ny LifeBogger, Miezaka ny hanana ny marina sy ny hitsiny izahay. Raha mahita zavatra tsy mety ianao, azafady mba zarao aminay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Hanome lanja sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
TANTARA MASO KOKOA BE
Tantaran'i Ivan Toney momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Emmanuel Dennis Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Rodrigo De Paul Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
SUSBSCRIBE TO STORIES LIFEBOGGER!
TANTARA AN-DALAM-BOLA EFA POPULAR
N'Golo Kante Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
DISCLAIMER !! LifeBogger dia tsy mitaky tompon'ny sary navoaka tao amin'ity tranonkala ity. Averina indray fa tsy mandray sary na horonan-tsary ny tenanay. Ny mpanoratra anay dia mampifandray ny tompona ara-dalàna fotsiny. Farany, LifeBogger dia nandinika sy nandinika tsara ny atiny rehetra. Na eo aza izany dia mety misy ny fampahalalana sasany mety lany daty na tsy feno.
Mifandraisa aminay: admin@lifebogger.com
Misoratra anarana amin'ny Lifebogger!
Alao amin'ny Inbox anao ny tantara momba ny lalao baolina kitra
Misoratra anarana izao!
Akatona ity fipoahana ity